10 tilaabo oo lagu abuurayo sahamin khadka tooska ah oo wax ku ool ah | Martech Zone
10 tillaabo oo lagu abuurayo sahamin khadka tooska ah oo wax ku ool ah
Arbacada, Juun 1, 2022 Arbacada, Juun 1, 2022 Douglas Karr
Aaladaha sahanka onlaynka ah waa wax aad u wanaagsan si wax ku ool ah oo hufan loo ururiyo loona falanqeeyo xogta. Sahan khadka tooska ah oo si wanaagsan la isula geeyey ayaa ku siinaya waxqabad, macluumaad cad oo ku saabsan go'aamada ganacsigaaga. Ku bixinta wakhtiga lagama maarmaanka ah ee hore iyo dhisidda sahan khadka tooska ah ayaa kaa caawin doona inaad gaadho heerar jawaab celin sare ah, iyo xog tayo sare leh waxayna aad ugu fududaan doontaa jawaab-bixiyayaashaada inay dhamaystiraan.
Halkan waxaa ah 10 talaabo oo kaa caawin kara abuur sahan wax ku ool ah, Kordhi heerka jawaabta ee sahamintaada, Iyo hagaajinta tayada guud ee xogta aad soo ururiso.
Si cad u qeex ujeedada sahankaaga - Baadhitaanno wanaagsan ayaa leh ujeedooyin diirada saaraya oo si fudud loo fahmi karo. Waqti hore ku bixi si aad u aqoonsato ujeedooyinkaaga. Qorshaynta hore waxa ay caawisaa in la hubiyo in sahamintu ay waydiiso su'aalaha saxda ah si loo gaadho ujeedada loogana soo saaro xog faa'iido leh.
Ka dhig sahanku mid kooban oo diiradda saara - Gaaban oo diiradda saaraya waxay ka caawisaa tayada iyo tirada jawaabaha labadaba. Guud ahaan way ka wanaagsan tahay in diirada la saaro hal ujeedo intii la isku dayi lahaa in la abuuro sahamin heersare ah oo daboolaya ujeedooyin badan. Cilmi-baadhis (oo ay weheliso Gallop iyo kuwa kale) ayaa muujisay in sahanku uu qaato 5 daqiiqo ama ka yar in la dhammaystiro. 6 - 10 daqiiqo waa la aqbali karaa laakiin waxaan aragnaa heerar ka tagis weyn oo dhacaya 11 daqiiqo ka dib.
Su'aalaha ka dhig mid fudud - Hubi in su'aalahaagu ay gaadheen meesha laga hadlayo kana fogow adeegsiga af-lagaadada, af-lagaadada, ama ereyada soo gaabinta.
Isticmaal su'aalaha xiran mar kasta oo ay suurtagal tahay - Su'aalaha sahanka xidhidhaysan ayaa siinaya jawaab-bixiyeyaasha doorashooyin gaar ah (tusaale Haa ama Maya), taas oo sahlaysa in la lafaguro natiijooyinka. Su'aalaha xiran waxay qaadan karaan qaab haa/maya, xulashooyin badan, ama cabirrada qiimeynta.
Su'aalaha cabirka qiimeynta ku hay mid joogto ah inta sahanku socdo - Miisaanka qiimayntu waa hab fiican oo lagu cabbiro laguna barbar dhigo qaybaha doorsoomayaasha. Haddii aad doorato inaad isticmaasho cabirrada qiimaynta (tusaale 1-ilaa 5), ​​ku hayso joogto inta sahanku socdo. Isticmaal tiro isku mid ah oo dhibco ah oo ku saabsan miisaanka oo hubi macnaha joogitaanka sare iyo hoose ee joogtada ah inta lagu jiro sahanka. Sidoo kale, isticmaal nambar aan fiicneyn oo ku jira cabirkaaga qiimeynta si aad xogta uga dhigto mid sahlan.
Dalbasho macquul ah - Hubi in sahankaagu u socdo hab macquul ah. Ku bilow horudhac kooban oo ku dhiirigaliya sahan-qaadayaasha inay dhamaystiraan sahanka (tusaale Naga caawi horumarinta adeegayaga adiga. Fadlan ka jawaab sahanka gaaban ee soo socda). Marka xigta, waa fikrad wanaagsan in laga bilaabo su'aalaha sal ballaaran ka dibna loo gudbo kuwa yar ee baaxadda. Ugu dambeyntii, ururi xogta tirakoobka oo weydii su'aalo kasta oo xasaasi ah dhamaadka (haddii aadan u isticmaalin macluumaadkan si aad u baadho ka qaybgalayaasha sahanka mooyaane).
Horay u tijaabi sahankaga - Hubi inaad hore uga sii tijaabisay ra'yi-ururintaada xubno kooban oo ka mid ah dhagaystayaasha aad beegsanayso iyo/ama la-shaqeeyahaaga si aad u hesho cillado iyo tafsiir su'aal oo lama filaan ah.
Tixgeli waqtigaaga markaad dirayso casuumaadaha sahaminta - Tirakoobyadii dhawaa waxay muujinayaan heerka ugu sarreeya ee furnaanta iyo gujiskuba waxay dhacaan Isniinta, Jimcaha, iyo Axadda. Intaa waxaa dheer, cilmi-baaristeenu waxay muujinaysaa in tayada jawaabaha sahanka aysan ku kala duwanayn maalmaha shaqada ilaa sabtida.
U dir xasuusinta iimaylka iimaylka - Iyadoo aan ku habboonayn dhammaan sahannada, u dirida xasuusinta kuwa aan hore uga jawaabin waxay inta badan bixin kartaa kor u kaca heerarka jawaabta. Hubi inaad ku darto sababta sahamintu muhiim u tahay iyo sida natiijadu u saamayn doonto khibrada macmiilka.
Tixgeli inaad bixiso dhiirigelin - Iyada oo ku xidhan nooca sahanka iyo dhagaystayaasha sahanka, bixinta dhiirigelinta ayaa inta badan aad waxtar u leh hagaajinta heerarka jawaabta. Dadku waxay jecel yihiin fikradda ah inay wax ku helaan waqtigooda. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tijaabiso abaal-marin lacageed, qiimo dhimis, ama xitaa is-reeb-reebka fursad aad ku guuleysato abaalmarin weyn. Ka digtoonow, in kastoo ... iyadoo dhiirigelinta sahanka ay kordhin karto dhammaystirka, waxaa laga yaabaa inaysan mar walba soo jiidan daawadayaasha la beegsanayo.
Sahanka Wadahadalka ee Nooca Qaabka
BONUS: Isticmaal madal sida Calaamadaynta kaas oo isticmaala habka sahanka qaabka wada sheekaysiga. Tan waxa kale oo loo yaqaan siidaynta horumarka ah… marka isticmaaluhu aanu ka niyad jabin waayo-aragnimada laakiin uu la kulmo hal su'aal sahamin ah markiiba.
Diyaar ma u tahay inaad bilowdo? Codso tillaabooyinka kore, billow sahanka oo diyaar u noqo inaad falanqeyso natiijooyinkaaga waqtiga dhabta ah. Hadda ma waxaad u isticmaashaa sahan online meheraddaada? Ma u aragtay in talooyinkan ay yihiin kuwo waxtar leh? Fadlan ku biir wada hadalka qaybta faallooyinka ee hoose.
Dhis Sahankaaga Nooca Koowaad
Shaacinta: Anigu waxaan ku xirnahay Calaamadaynta waxaanan ku isticmaalayaa xidhiidhadayda ku xidhan maqaalkan.
Tags: sahanka wada hadalkasida loosahan wareegatalooyinka sahanka internetkasahannada tijaabada ka horshaacinta horumarkaQiyaasta qiimeyntaapps sahankaxasuusinta iimaylka sahankadhererka sahankanidaamka sahankamadal sahankasu'aalaha sahankabaaritaanka sahankatalooyinka sahankaqalabka sahankanooca
Hababka Cusub ee Xayeysiiska Dijital ah Kaddib Kukiyada Qolalka Saddexaad Ma jiraan
Nov 26, 2014 at 6: 22 AM
Waad ku mahadsan tahay talooyinka noocan oo kale ah :)